PSC (पोर्टेबल सफ्टवेयर सेन्टर) ले तपाइँको भण्डार गृह लिनुहोस् लिनक्सबाट
बाट विकासकर्ताहरूको समूह UCI (क्युबाको कम्प्युटर विज्ञान विश्वविद्यालय) केही महिना अघि उनीहरूले एउटा अनुप्रयोग प्रोग्राम गरे अजगर कल गर्नुहोस् रिपोमेन सीएलआई, एक सफ्टवेयर अनुकूलन अनुप्रयोग भंडारहरू सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको।
हामीले राख्ने विधिहरूको लागि यो अर्को विकल्प हो यो पोष्ट अनुकूलन भण्डारहरू सिर्जना गर्न र ती ठाउँमा लैजानुहोस् जहाँ तपाईंसँग इन्टरनेट पहुँच छैन।
यसको आफ्नै लेखकका अनुसार:
जब अनुप्रयोग अनुकूलन भण्डारमा थपिएको छ, रिपोम्यानले पीसीले कन्फिगर गरेको रिपोजिटरीबाट यसको सबै निर्भरताहरू डाउनलोड गर्दछ जुन यसले चलाउँछ; तब अनुकूलन भण्डार कुनै पनि उपकरणमा सारिन सकिन्छ र अर्को पीसीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन आधिकारिक रेपोमा पहुँच गर्दैन। रेपोम्यानले पनि कस्टम रिपोजिटरीबाट अनुप्रयोगहरू हटाउन अनुमति दिन्छ, जब यो हुन्छ यसले सबै निर्भरताहरू हटाउँदछ जुन अन्य अनुप्रयोगहरू द्वारा प्रयोग गरिएन।
खैर, PSC यो केवल एक छ फ्रन्ट-एंड लागि रिपोमेन, कि, एक ग्राफिकल ईन्टरफेस। हाल यो अनुप्रयोग मा छ 0.2 संस्करण, जसले केहि बगहरू सच्याउँछ र सुधारहरू थप्दछ:
सेक्सन द्वारा फिल्टर खोज को सुविधा को लागी जोडिएको छ।
स्वत: पूर्ण संग एक खोज जोडियो।
अब यसले परिवर्तनहरू देखाउँदछ जुन अनुप्रयोग स्थापना र स्थापना हटाउँदा गर्ने छ।
अब प्रयोगकर्ताले प्याकेजको बारेमा जानकारी हेर्न सक्दछ।
प्रमाणीकरण त्रुटिहरू तय गरिए।
रिपोमन इञ्जिन निर्भरता रिजोलुसन एल्गोरिथ्मको साथ सुधार गरिएको थियो, जुन केहि केसहरूमा सबै निर्भरताहरू डाउनलोड गर्दैन।
रिपोमन इञ्जिन उत्पन्न गरिएको भण्डारको संरचना सुधार गरिएको थियो, अब क्लासिक संरचनाको साथ रिपोजिटरीहरू सिर्जना गर्दै।
अनुप्रयोगको भण्डारहरूको साथ काम गर्न विकसित गरिएको थियो Ubuntu y Debian (छविमा) र तिनीहरूले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्दछन् PSC बाट यो लिङ्क.
फाईल भित्र प्रयोगकर्ता म्यानुअल समावेश छ। कुनै त्रुटि रिपोर्ट गर्न वा सुझाव दिन, तपाईं परियोजना पृष्ठमा जान सक्नुहुन्छ (क्युबामा) वा लेख्नुहोस् rreynaldo [at] विद्यार्थीहरू [dot] uci [dot] cu o cccaballero [at] छात्रहरू [डट] uci [dot] cu। सबै प्रतिक्रिया कि तिनीहरूले टिप्पणीहरूमा छोडिन्छ हामी उनीहरूलाई विकासकर्ताहरूलाई पनि पठाउनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » पीएससी (पोर्टेबल सफ्टवेयर सेन्टर) ले तपाईको भण्डार गृह लिनेछ
चाखलाग्दो अनुप्रयोग, एक राम्रो उदाहरण धेरै कम्प्युटरहरूमा समान समूहको पुनर्स्थापना हुनेछ, ब्यान्डविथको खपत नगरी र छोटो समयमा यो कार्य प्राप्त गर्दा, निम्न अपडेट हुनेछ, तर मलाई लाग्दैन कि सबै पुस्तकालयहरू एकै समयमा परिवर्तन हुनेछ। , hehe, प्रोजेक्टको पक्षमा राख्नुहोस् 😀
Taregon Welcome स्वागत छ
अब म देख्छु रिपोमेन बाहिर आयो, १.1.3 मात्र 779.7 3,3 .XNUMX। K Kb को साथ र अघिल्लो एउटा जुन उनीले यो पोष्टमा राखेका थिए XNUMX..XNUMX Mb हो। भिन्नता के हो?
नियो 61१ लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई वास्तवमा थाहा छैन, तर कोड र स्पेस प्रणालीको आफ्नै पुस्तकालयहरू प्रयोग गरेर अनुकूलन गरिएको हुन सक्दछ, स्थापितकर्तामा अधिक फाईलहरू समावेश गर्नुको सट्टा।
यस विचारका सिर्जनाकर्ताहरूलाई बधाई छ। सबैजनासँग इन्टरनेटमा पहुँच छैन, यसका साथै यसले लिनक्सलाई विकासोन्मुख देशहरूको नजिक ल्याउँछ वा केवल कुनै कम्प्युटरमा जुन कुनै कनेक्शन छैन।
धन्यवाद! यो सबैको सोच्दै छ।
ग्रेट! इन्टरनेट अझै धेरै कम्प्युटरहरुमा पुगेको छैन।
रेने सान्चेज भन्यो
धेरै राम्रो पोष्ट, म एक रिपोम्यानलाई खोज्दै छु जसले लिनक्समिन्ट १ and र केही पनि राम्रोसँग काम गरेन। जबसम्म मैले यो एक महान पाइरहेको पाउँदिन, धेरै धेरै धन्यवाद ... ..
रेने सान्चेजलाई जवाफ दिनुहोस्